2015 年 1 月9日, 将是永载西子优耐德电梯史册的喜庆吉日上午, 临安新工厂盛势启航; ။ 下午, 2015 年营销年会圆满举行上午 10 时 38 分, 以 "绽放။ - 盛典 "为主题的新工厂开业大典在园区中心草坪盛势举行, 当地政府的领导, 行业专家, 新工厂建设者与来自海内外的合作伙伴与客户代表等近千名嘉宾出席倍受业内။外关注的临安新工厂, 集研发, 测试, 制造与服务等为一体, 配置齐全, 功能强大, 规模一流, 实力超群, 这是西子电梯 35 年荣耀的结晶, 更是一座充满人文情怀的, 世界级的, 力树行业标杆的智慧型工厂။ 正式投入运行的临安新工厂, 必将助推西子优耐德进一步凝聚各方智慧和力量, 锐意开拓创新, 持续做大, 做强, 为繁荣电梯市场作出更加积极的贡献! 下午, 公司 2015 营销年会在洲际大酒店隆重举行။ 大会主要发布了 GCS8000 高速电梯, VC ကို / VD 型客梯, 新一代无机房电梯及安全扶梯等新产品။ 西子优耐德的快速发展, 离不开几百家合作伙伴所创造的汗马功劳။ 为表彰他们的卓越贡献, 公司奖励了 28 位 " 2014 年度风云人物 "同时, 特别颁发了四名" 新工厂献礼奖 "။ 汇聚梦想, 分享成长။ 大会的高潮环节是更为激动人心的签约仪式, 45 家客户单位当场与公司签署了战略合作协议, 为西子优耐德 2015 年 15000 台的订单目标打下坚实的基础对于西子优耐德电梯, 这是一次具有里程碑意义的盛会; ။ 从现在起, 西子优耐德已立足于更高的发展平台, 并将延续经典, 激情绽放, 不断超越, 阔步走向更加辉煌的未来။
Xizi ဓာတ်လှေကားတောက်ပနေတူရကီ Eurasian ဓာတ်လှေကားပြပွဲ
မတ်လ 23, 2017 - 26, 15 တူရကီ Eurasian ဓာတ်လှေကားပြပွဲအစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ, အ exhibiti ကျင်းပခဲ့သည် ...
မတ်လ 23, 2017 - 15 တူရကီ Eurasian ဓာတ်လှေကားပြပွဲအစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီကျင်းပခဲ့သည် 26, ပြပွဲအတူတူအားလုံးလူသိများတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဓာတ်လှေကားစက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်တတ်၏။ ပြည်တွင်းဓာတ်လှေကားစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်စက်လှေကားထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေး, Xizi ဓာတ်လှေကားကိုဖိတ်ကြားပြသခဲ့သည်အဖြစ်။
အဆိုပါပြပွဲသည်အနောက်ဓါတ်လှေကားနှစ်ဖက်စလုံးပေါ်တွင်ကျယ်ဝန်းပွင့်လင်းတဲမှအပြည့်အဝပေးဖို့သစ်ကိုလာရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှနိုင်ငံအသစ်များဆွဲဆောင်ဖို့အသိဉာဏ်သစ်တစ်ခုထုတ်ကုန်များဆက်တိုက်နှင့်တကွ, အနောက်ဓာတ်လှေကားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားသာချက်များ, နည်းပညာအစွမ်းသတ္တိ, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဆင့်ကိုသရုပ်ပြနှင့် ညှိနှိုင်းမှုတိုင်ပင်ဖို့အဟောင်းဖောက်သည်သူတို့အနောက်နိုင်ငံတွေဓာတ်လှေကားနှင့်အတူ In-depth ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဘုံဖှံ့ဖွိုးတိုးတသောမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ အားကြီးသောအမှတ်တံဆိပ်ခွန်အားနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိကိုပြသနိုင်ဖို့နောက်ထပ်ကမ္ဘာကြီးကိုဓာတ်လှေကားစက်မှုလုပ်ငန်းမှပြပွဲ, အနောက်ဓါတ်လှေကား။ အနာဂတ်မှာ, အနောက်ဓါတ်လှေကားစူးစမ်းဖို့ကွိုးစားနှင့်တက်ကြွစွာကမ္ဘာကြီးကိုအမှတ်တံဆိပ်အသေးစိတ်အစီအစဉ်သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ကို "ထွက်" မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, လေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်။
အနီးကပ် lzmir ဖို့တူရကီအစိုးရသတ်မှတ်ထားသောဓာတ်လှေကားဝန်ဆောင်မှု, ဒီတိုင်းပြည်အတွင်းအနောက်ဘက်ဓာတ်လှေကားဒါပေမယ့်လည်းအများကြီးအံ့သြဖွယ်အမှုအရာ left, ထိုဂန္ ALAC စီမံကိန်း၏တဦးတည်း, တူရကီအတွက်အရေးကြီးသောမြို့ Alasehir, ဤစျေးဆိုင်၏ငါးထပ်နှင့်အိမ်တအိမ်၏ 22 ထပ်အဖြစ် တစ်ဦး Alasehir ခေတ်သစ်အသိဉာဏ်အထင်ကရအဆောက်အဖြစ်ပါတယ်။ Xizi ခရီးသည် LIFT မီး LIFT, စက်လှေကားပေးအပ်နှင့်တွေ့ကြံနောက်ဆုံးပေါ် EN81 စံနှင့်အီးလက်မှတ် walkways ။ xizi အဘို့, ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်, ဒါပေမယ့်လည်းကမ္ဘာကြီးဖို့ "တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ်" မြှင့်တင်ရန်များ၏တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။
2017 xizi ဓာတ်လှေကားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးခွဲဝေမှုပါတီ - Co-ဖန်တီးအတွက်ဦးဝင်း
ဖေဖော်ဝါရီလ 24 ရက်နေ့တွင်အနောက်ဘက်ဓာတ်လှေကား "စိတ်ကူးဖန်တီးပါ။ အဆိုပါ w မှာ 2017 အနောက်ဘက်ဓာတ်လှေကားစျေးကွက်ဝေစုပါတီ "မှာဝင်းက ...
ဖေဖော်ဝါရီလ 24 ရက်နေ့တွင်အနောက်ဘက်ဓာတ်လှေကား "စိတ်ကူးဖန်တီးပါ။ အနောက်ဘက်ဟိုတယ်တွင် 2017 အနောက်ဘက်ဓာတ်လှေကားစျေးကွက်ဝေစုပါတီ "မှာဝင်းကမစ္စတာအနောက်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်သမ္မတချန် Xiaxin, ms လက်ဆောင်အသစ်သော Theo သမ္မတမစ္စတာအနောက်ဓာတ်လှေကားကသမ္မတ wen-Chao Liu, ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်အတူ Tse နှင်းပန်းအလုပ်အမှုဆောင် ms စျေးကွက်အနောက်ဘက်ဓာတ်လှေကားအဆုံးသတ် စည်းဝေးရာသို့ရောက်တိုင်းပြည်ကုန်သည်တွေနဲ့အရောင်းအထက်တန်းလွှာကျော်အားလုံးအနေဖြင့်အတူတကွဤဖြစ်ရပ်ကိုမျက်မြင်။
အနောက်ဓာတ်လှေကားအခမ်းအနားအမည်ပြောင်း - ထိုအတွက်ပါတီသီချင်း, ပယ်ကန်ထို့နောက်ပါတီရဲ့သော့ချက် link ကိုဝင်ကြ၏ "ဟန်ကျိုးသင်သည်ကြိုဆိုပါတယ်" ။ အဆိုပါပါတီသည်ဤတရုတ်အမျိုးသားရေး၏ဝိညာဉ်ကိုသယ်ဆောင်မစ္စ Shen Hui နှင့်အနောက်ကြွမိတ်ဖက်မှာ "အနောက်" ရေလောင်းကမ္ဘာလုံး၏အပေါငျးတို့သထောင့်ကနေရေနှင့်အတူ, ဒီသမိုင်းဝင်အခိုက်အသက်သေခံခြင်းငှါ, Lin'an စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအမြဲတမ်းကော်မတီသွားရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ် စက်မှုလုပ်ငန်းလက်သမားအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်။ အနောက်ဓာတ်လှေကား wear မှကျောက်တဲ့ရေစက်ကဲ့သို့ဖွံ့ဖြိုးရေး, စုဆောင်းခြင်း၏ဆယ်စုနှစ်သုံးခု, ပင်လယ်မြစ်နှင့်နစ်မြုပ်, စုဆောင်းခြင်းတစ်နည်းနည်းယနေ့တောက်ပန့်ပစ်သည်။ ပွင့် stunning ယနေ့ Xizi ဓာတ်လှေကား, ကျိုးပဲ့ပိုးအိမ်မှထွက်, ဘုန်းအသရေနှင့်အတူသစ်တစ်ခုခရီးစတင်ခဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်!
နိုင်ငံတော်သမ္မတလျူ Wenchao နှင့်စျေးကွက်အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Xie Liping ကကဗျာကိုတစ်ဦးစုစုပေါင်းနောက်တော်သို့လိုက် - "အနောက်နိုင်ငံတွေကဖြုန်း": အနောက်နိုင်ငံတွေမှာပန်းပွင့်, သုံးဆယ်ခြောက်နှစ်နှိုးဆော်ကျနော်တို့ဒါအကြောင်း, ရှေ့တော်၌, အတူတူငါအမြဲတမ်းကဗျာတစ်ပုဒ်အောက်မှာရေးဖို့အခါတိုင်းလမ်းလျှောက် နားမလည်နိုင်လောက်အောင်အတွေးများကိုသီခငျြးဆိုပါမှလေတိုက် ... ... ကဗျာရွတ်ဆိုထားသောနှင့်အတိတ်မှအဟောင်းကိုဓါတ်ပုံများ၏ကုမ္ပဏီရဲ့အလုပ်ကြိုးစားမှုများနှင့်ချွေး, လူတိုင်းကိုပြန်၏အမှတ်တရများ၏စံချိန်တင်၏အသံ။ အဆိုပါအဆိုပါအဆိုပါအဆိုပါအဆိုပါ
လျူနှင့် Xie စုစုပေါင်းကဗျာရွတ်ဆိုထားသောကိုလည်းအနောက်မစ္စတာ Chen က Xiaoxin ခံစား၏ Co-သမ္မတကြကုန်အံ့, ထိုသူသည်အနောက်ယနေ့ဓါတ်လှေကား၏အောင်မြင်မှုများမတော်တဆပေမယ့်ကမ္ဘာလုံး၏အပေါငျးတို့သထောင့်ကနေမရကြောင်းဆိုပါတယ် တိုင်းထူးချွန်မိတ်ဖက်များနှင့်အနောက်ဓာတ်လှေကားအလုပ်အတူတူလာရုန်းကန်နားမှာခြမ်း။ ကျနော်တို့ကင်ရှိသည်, နှင့်အနောက်နိုင်ငံများဓါတ်လှေကားခမ်းနားပြပွဲဆန္ဒရှိ, ကတိပေး! မြေတပြင်လုံးညနေပိုင်းတွင် mellow စပျစ်ရည်, သွန်းလောင်းပျော်စရာနှင့်အတူလူတိုင်းနှင့်ပြည့်စုံလေ၏။
ပါတီများ၏ပုံစံကိုအံ့သြစရာအစီအစဉ်ကိုအဆုံးမဲ့ကြွယ်ဝသောသူ, ရောင်စုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပါတီကိုလည်းခုနစျပါးမွေးနေ့မိတ်ဖက်များအတွက်အံ့သြစရာမွေးနေ့ပါတီကိုပြင်ဆင်မစ္စတာလျူ Wenchao, နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်မစ္စ Xie Liping, စျေးကွက်၏သမ္မတ, ကိုယျတိုငျအသက်ရှည်အတူရင်ခုန်စရာအချိန်လေးဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးဆန္ဒကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအံ့ဘွယ်သောရွေ့လျားနေသည့်အတွက်ညဥ့်နှင့်ဝမ်းမြောက်မိတ်ဖက်များ၏ပြန်လာဖို့ရှေ့ပွေးနိမိတျဖွင့်လှစ်မယ့်အမြင်အဘို့ဆောင်သောပွဲနှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်အနောက်ဓါတ်လှေကားရောက်ကြ၏။ လှည့်လည်ရာမျှနေရင်းဒေသများရှိသည်ဆိုပါက - ချစ်လှစွာသောမိတ်ဖက်, အိမ်ပြန်မှကြိုဆိုပါ၏!